Af-soomaali (somaliska) - KPA Pension
Waa sidan lacagtaada hawgabku
Lacagtaada hawlgabku waxay ka timaadaa dhowr jihooyin oo kala duwan. Waxaynu u eekaysiinaynaa dhismo saddex xagal u samaysan oo leh saddex qaybood: lacagta hawlgabka guud, lacagta hawlgabka shqada iyo kadyinta lacagta hawlgabka ee gaarka ah. Wadajir waxay isku noqonayaan lacagtaada hawlgabka ee guud.
Lacagta hawlgabka ee guud waa qaybta aad kaydsato dhinaca nidaamka lacagta hawlgabka ee dawladeed. Lacagta hawlgabka shaqada waxad ku kasbanaysaa shaqadaada. Waa shaqo-bixiyahaaga cida bixinaysa lacagahan ku aadan lacagta hawlgabka ee guud iyo lacagta hawlgabka shaqada. Xitaa adiguna waxad ku buuxin kartaa dhinaca kaydin lacag hawlgab oo gaar ahaaneed si loo isleekaysiiyo farqiga ka soo bixi kara dakhliga bishi maalinta aad gasho hawlgabnimo.
Meeshan minpension.se waxad ka heli kartaa sawir ku saabsan lacagtaada hawlgabka ee guud.
Lacagta hawlgabka ee KPA ayaa u daryeesha lacagta hawlgabka shaqada qofka ah shaqaale degmo ama gobol. Marka shaqo-bixiyahaagu bixiyo lacagta ku aadan hawlgabkaaga ee anaga na siiyo waxad noo noqonaysaa macmiil. Waxanu lacagtaada halwgabka u daryeela si kharash hooseysa oo u dhigaynaa marka loo eego qawaaniintayada dhigida ee anshaxa. Ma u baahnid inad ka fikirto wax badan oo intaasi dheer.